SAWIRO: Musharax Abdirahman Abdishakur oo madaxtooyada Galmudug loogu sameeyey soo dhaweyn – Kismaayo24 News Agency
SAWIRO: Musharax Abdirahman Abdishakur oo madaxtooyada Galmudug loogu sameeyey soo dhaweyn
by admin 7th October 2016 0122
Musharax Abdirahman Abdishakuur Warsame oo baryahan socdaal ku marayey gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa caawa xaflad ballaaran oo ay kasoo qeybgaleen madax iyo shacab badan loogu sameeyey xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug.
Xafladan ayaa waxaa kasoo dhex muuqday madaxda Galmudug oo ay ka mid yihiin Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Abdi “Ganey”, guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Ali Gacal Casir, guddoomiyaha xisbiga wadajir Kamal Gutale, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan Galmudug iyo musharixiin u taagan labada aqal ee dowlada.
Guddoomiyaha xisbiga Wadajir Kamal Gutale oo ka hadlayey hadafka xisbigooda iyo ujeedka ay ku doorteen inuu Abdirahman Abdishakuur u noqdo musharaxa Madaxweyne oo doorashada sanadkan uga qeybgalaya ayaa sheegay inay muddo badan ka baaraan degayeen go’aankaasi.
“Abdirahman Abdishakur waa musharaxa xisbiga Wadajir, waana aqoonyahan xog-ogaal u ah xaalka siyaasadeed ee dalka, annaga oo taasi ka duuleyno ayaa Abdirahman ku dooranay barnaamijkiisa siyaasadeed ee la magacbaxay ISKU-TASHI, taasi oo uu uga duwan yahay musharixiinta kale oo dhan” ayuu yiri Guddoomiye Kamal Gutale.
Xildhibaanad Canab oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug ayaa dhankeeda sheegtay inay Abdirahmaan ku yaqaanan wanaag iyo hoggaan toosan, sidaasi darteedna ay dooran doonaan xubno matela aqalka sare oo isbadel-doon dhab ah .
Musharax Xildhibaan, Abdiweli Ibrahim Garyare, oo ka mid ahaa mas’uuliyiinta halkaasi ka hadashay ayaa waxaa uu bulshada kasoo qeybgalay la wadaagay maanso iyo shirib la xiriira arrimaha doorashooyinka, isagoona Abdirahman Abdishakuur ku tilmaamay hoggaamiyaha kaliya ee soo bandhigtay “Barnaamijkiisa siyaasadeed”
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Ali Gacal Casir ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay Cadaado oo uu soo gaaray musharax Abdirahman Abdishakuur, oo uu sheegay inuu yahay siyaasi miisaan weyn ku dhex leh dalka Soomaaliya, isagoona u rajeeyey guul uu ka gaaro dadaalkiisa musharaxnimo.
“Abdirahman kusoo dhawaw Cadaado, waa magaalo dadku u siman yihiin, waana magaalo astaan u ah midnimada iyo dowladnimoada. Sidaasi darteed, waxaan ku leenahay musharax noola siman kuwa kale ayaa tahay. Waxaana sugeynaa in waxqabadkaaga fulo, haddii xilkaasi laguu doorto” ayuu yiri Guddoomiye baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug ahna ku simaha Madaxweynaha Galmudug Maxamed Xaashi Abdi “Ganey” ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada uu Cadaado ku yimid musharax Abdirahman Abdishakuur, oo uu sheegay inay halgan badan soo wada galeen.
“Abdirahman oo aan isku aheyn reer UK, markana aan isla soo galnay halgankii isbaheysiga dib u xoreynta Soomaaliya ee fadhigiisa ahaa Casmaro, markii danbase usoo wareegay Jabuuti, inuu maanta musharax Madaxweyne yahay waa arrin farxad ii ah. Waxaana leeyahay noqo geesi guul u horseeda dalka Soomaaliya. Waana hubaa kartideeda inaad leedahay ” ayuu yiri Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Abdi.
Waxaana intaasi kadib hadalka lagu soo dhaweeyey musharax Abdirahman Abdishakuur oo kasoo qeybgalayaasha u faahfaahinayey ujeedooyinkiisa siyaasadeed iyo qaabka uu rabo inuu dalka ku hoggaamiyo. Isagoona sal uga dhigayey shan qodob oo uu caan ku yahay.
” Marka hore Galmudug in aan soo gaaro oo la igu soo dhaweeyo waxay ii tahay mid qiimo sare ii leh, waxaana leeyahay sida aad iigu soo baxdeen, oo wanaaga iyo hoggaanka togan iiga fileysaan ayaana rajeynayaa in aan idin ku shaqeeyo” ayuu yiri Musharax Abdirahman Abdishakuur.
Mar uu ka hadlayey arrimaha Galmudug iyo la hishiisiinta qeybaha kasoo horjeeda maamulkaasi ayuu waxaa uu sheegay inuu arrintaasi ku howlan yahay.
” Galmudug waxaa ay tahay mid socod-barad ah oo u baahan gardaadin badbaado qabta,maxaa yeelay wixii ka maqan oo dhan in lagu soo daro ayaan dadaal weyn ugu jiraa, waana mida keentay in aan waqti badan geliyo”
Dhinaca kale, mar uu ka hadlayey ammaan xumada dalka ka jirta ayuu sheegay inay mas’uuliyadaasi leedahay dowlada Soomaaliya oo is dhigatay, kadib markii ay ammaankii dalka oo dhan ku haleeysay ciidanka AMISOM.
“Dal ciidan ay u yihiin AMISOM, dhaqaalaha uu ku socdana ay iska leeyihiin beesha caalamka, waxaan is leeyahay kama baxayo dhibka uu ku jiro, waana qaladka ugu weyn oo ay dowlada dhexe ee Soomaaliya gashay.” ayuu yiri Abdirahman Abdishakuur, oo intaasi raaciyey:
“Sidaasi darteed, ayaan u sameynay annaga barnaamijka isku-tashi oo ah mid ay wax ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaana ay iyaga is dabooli doonaan, maxaa yeelay 2 bilyan ayaa dalkan ay soo geliyaan qurbajoogta, xoolaha aan dhoofino iyo kheyraadka kale ee alle ina siiyey oo laga faa’ideysto ayaa qeyb ka qaadan laheyn ka bixida taageero shisheeye oo loo fadhiyo” ayuu yiri musharax Abdirahman Abdishakuur.
“Doorashadii dalka waxay u qabsoomi la’dahay waa dhaqaalaha ku bixi lahaa oo laga sugayo beesha caalamka, bal dal sidaasi ah iyo hoggaankii sidaasi ina baday miyaa wax kale laga sugayaa?”
Mar uu ka hadlayey doorka haweenka iyo siyaasada dalka ayuu sheegay inuu dhiirigelinayo kaalin wanaagsan oo haweenka laga siiyo dowlada iyo xilkasta oo dadka loogu adeegayo, isagoona wadaadada diidan kaalinta dumarka ugu baaqay inay arrintaasi joojiyaan.
Dhinaca garsoorka ayuu sheegay inay dowlada Soomaaliya aad ugu fashilantay, isagoona taasi badelkeeda sheegay inay kooxda Al-Shabaab ka garsoor fiican tahay dowlada dhexe.
” Gobollada Al-Shabaab joogaan garsoor ka wanaagsan midka dowlada ayaa ka jira, sidoo kalana ammaan ayaa ka jira, dadkana wixii ay u guddoomiyaan ayaa ka shaqeeya, balse deegaanada ay dowlada Soomaaliya ka taliso 30 km waxaa taalo xarumo ciidan oo midkasta goonidiisa uu canshuur uga qaadanayo baabuur ay dowlada canshuurtay” ayuu yiri Musharax Abdirahman Abdishakuur.
Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Generaal Yusuf Indhacade, Generaal Subxaanyo oo ka mid ah mushariixinta u ordeysa aqalka hoose ee baarlamaanka dalka, guddoomiyaha degmada Cadaado, halka ay heeso la xiriira barnaamijka musharax Abdirahman Abdishakuur ay qaadayeen kooxda xiddigaha Galmudug.
Ugu danbeyntiina xaflada lagu soo dhaweeyey Abdirahman Abdishakuur ayaa kusoo dhamaatay, iyaddoona shacabkii kasoo qeybgalay uu mid mid u salaamayey musharax Abdirahman Abdishakuur Warsame. Waxaana uu horey usoo maray oo sidan oo kale loogu soo dhaweeyey magaalooyinka Muqdisho, Baledweyne iyo Dhuusamareeb.
Daawo Balaarin iyo dib u habeyn lagu sameynayo Madaxtooyada Galmudug
Daawo Musharax Adan Holal oo Cabudwaaq lagu so dhaweyay
Shirkii Golaha Dowlad Goboleedyada Soomaaliya Oo baaqday
Jubbaland oo war cusub ka soo saartay Meelmarintii Nidamka doorashada
admin 22nd May 2016
Shir looga hadlayo Maalgashiga & Ganacsiga Soomaaliya oo Turkiga ka furmayo
Tifaftiraha K24 22nd February 2016